November | 2011 | MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA
Religions & NGOs From Mandalay Unite For Victims of Civil War November 30, 2011
Filed under: MY NEWS,Peace,PHOTOS,UNITY IS STRENGTH,Videos — Nyo Gyi @ 3:14 pm
မန္တလေးမြို့၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ကရုဏာရှင်များအဖွဲ့
ကချင်ဒေသရှိ သွေးရင်းညီနောင်သားချင်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအတွက်
(၃၀၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁)
အဆိုပါ အခမ်းအနားကို မန္တလေးမြို့၊ ၈၂ လမ်း၊ ၂၅ လမ်းနှင့် ၂၆ လမ်းကြားရှိ ရွှေနှလုံးတော် ကာသီဒြယ် ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွင် (၃၀၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁) နေ့လည် ၂ နာရီမှ ၄ နာရီကျော်ခန့်အထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
၁။ အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း
၂။ ဆုတောင်းပွဲပြုလုပ်ရခြင်းအကြောင်းတင်ပြခြင်း – ဆရာတော်အရှင်ဦးစိန္တိတ (အာရှအလင်းရောင် ဆရာတော်)
၃။ အစ္စလာမ်မစ်သာသနာမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း
၄။ ဘဟာအီဘာသာ သာသနာမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း
၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း
၆။ ဟိန္ဒူသာသနာမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း
၇။ ခရစ်ယာန်သာသနာမှ ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခြင်း
၈။ အလှူငွေ လှူဒါန်းမည့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တင်ပြခြင်း
၉။ အလှူငွေ ကောက်ခံခြင်း
၁၀။ အခမ်းအနားပြီးဆုံးကြောင်း ကြေညာခြင်း
အခမ်းအနားပြီးဆုံးပါက သက်ဆိုင်ရာလူမှုအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ အမှုဆောင်လူကြီးများ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း အစီအစဉ် ဆက်လက်ပြုလုပ်ပါမည်။
အာရှအလင်းရောင်ဖောင်ဒေးရှင်း(ပြင်ဦးလွင်)၊ ဗြဟ္မစိုရ်လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ YMCA၊ ဘဟာအီဘာသာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ မန္တလေးကရုဏာ၊ ပုလဲပရဟိတ၊ မဟာမြိုင် လူမှုကူညီရေးအသင်း၊ ဇနသုခ ရေသန့်အလှူတော်၊ ကရင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်၊ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်၊ ယေဇူးရွှေနှလုံးတော်၊ ရခိုင်သဟာရ၊ မက်သဒစ်အသင်းတော်(အထက်မြန်မာပြည်)၊ YSCM၊ ချမ်းမြမေတ္တာလူမှုကူညီရေး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လောကပါလလူမှုရေး၊ ရတနာမွန်သွေးလှူရှင်အသင်း၊ ဗိသုကာလူမှုရေး၊ စိတ္တသုခလူမှုကူညီရေး၊ ဟိန္ဒူဘာသာမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ကလေးချစ်သူများကွန်ယက်၊ လွတ်လပ်သောသူငယ်ချင်းများအင်အားစု၊ ရတနာ့မေတ္တာ၊ မြင့်မြတ်ဧရာဝတီ
အစရှိသည့် မန္တလေးမြို့ခံ ဘာသာသာသနာပေါင်းစုံမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ လူမှုကူညီရေးအသင်းပေါင်းစုံမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလှူရှင်များ၊ သတင်းထောက်များ အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
(အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ယခုစာရင်းတွင် ဖော်ပြရန်ကျန်ရှိသော ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။)
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ဒုတိယပတ်အတွင်း စစ်မက်ဖြစ်ပွားလျက်ရှိသော ကချင်ဒေသရှိ စစ်ဘေးဒဏ်သင့်ဒုက္ခသည်များကို မန္တလေးမြို့၊ ဘာသာပေါင်းစုံကရုဏာရှင်များအဖွဲ့က အကူအညီများသွားရောက် ပေးအပ်လှူဒါန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
စစ်ဒုက္ခသည်များအတွက် တတ်အားသမျှ ပါဝင်လှူဒါန်းကြရန် နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
Stop the Civil War! We Want Peace! November 24, 2011
Filed under: MASOEYEIN MONASTERY,MY NEWS,Peace,PHOTOS,UNITY IS STRENGTH,Videos — Nyo Gyi @ 4:11 pm
ယနေ့ နေ့လည် ၁ နာရီမှ ၃ နာရီထိ မန္တလေးမြို့၊ မဟာအောင်မြေမြို့နယ်၊ ၅၅ လမ်း၊ ၄၀ နှင့် ၄၁ လမ်းကြား၊ ရဲမွန်တောင်ရပ်ရှိ ကံတက်ကုန်းမစိုးရိမ် ဘုန်းကြီးပညာသင်ကျောင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးဟောပြောပွဲနှင့် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ကလေးငယ်များ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။
“စစ်ဟူသည် နိုင်သူလည်း ဒုက္ခရောက်၏။
(မနက်ဖြန် (၂၅၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁)၊ နေ့ ၂ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီအထိလည်း အထက်ပါ ကံတက်ကုန်း(မစိုးရိမ်)ကျောင်းတိုက်မှာပင် ကလေးချစ်သူများကွန်ယက်မှ ကြီးမှူး၍ “နယ်မြေလုံခြံမှုမရှိသော ဒေသများရှိ ကလေးသူငယ်များသို့ ထောက်ပံ့ကူညီလှူဒါန်းရန် အလှူငွေလက်ခံခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆုတောင်းပွဲ” ကျင်းပဦးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။)
Myanmar-Thabin-Ah-Hla-Sin-Thumyar And Pakokku Flood Victims November 23, 2011
Filed under: MY NEWS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 6:44 am
Poet Tin Moe’s 78th Birthday November 19, 2011
Filed under: MY NEWS,OTHERS' POEMS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 4:05 pm
An Announcement From Masoeyein Monastery About Peace Monks November 18, 2011
Filed under: MASOEYEIN MONASTERY,MY NEWS,PHOTOS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 4:23 pm
Monks for Peace in Mdy, Masoeyein (16, Nov, 2011) November 16, 2011
Filed under: MASOEYEIN MONASTERY,MY NEWS,PHOTOS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION,Videos — Nyo Gyi @ 11:05 am
အခမ်းအနားအပြီးတွင် “သမ္မတကြီးအားတောင်းဆိုထားသော အချက်သုံးချက်ကို သဘောတူထောက်ခံကြသော ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ သံဃာတော်များနှင့် တကာ၊ တကာမများ၏ လက်မှတ်များ” အား ငြိမ်းချမ်းရေး ဆရာတော်များက ကောက်ခံခဲ့သေးကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
“မန္တလေး၊ မဟာမြတ်မုနိဘုရားကြီး၊ မဟာဗုဒ္ဓ၀င်ဗိမာန်တော်ကြီးတွင် သံဃာတော်များ သပိတ်မှောက်”
“မန္တလေးမှ သပိတ်မှောက်သံဃာတော်များနှင့်ပတ်သက်သော နောက်ဆုံးရ သတင်းများ“
Latest News about Monks’ Demonstration of Mandalay (9:30 PM, Nov 15, 2011) November 15, 2011
Filed under: MASOEYEIN MONASTERY,MY NEWS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 5:25 pm
‎”Tomorrow 12 AM, old Masoerein campaign will take part in! Please forward” ဆိုသော Message စာသားများ မန္တလေးမှ လက်ကိုင်ဖုန်းကိုင်သူအချင်းချင်း ဖြန့်ဝေနေကြကြောင်း ကြားသိရပါသည်။
သတင်းရေးချိန် – 9:30 PM, 2011, Nov 5
Filed under: MASOEYEIN MONASTERY,MY NEWS,Videos — Nyo Gyi @ 5:26 am
Nyo Gyi’s Video Clips on Facebook
Literature Talk in Sagyin Village, Madayar Township (13.11.2011) November 12, 2011
Filed under: MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 3:09 pm
ကထိန်ခင်း – ၁၂၊ ၁၁၊ ၂၀၁၁ (စနေနေ့)
စာပေဟောပြောပွဲ – ညနေ ၅ နာရီမှ ည ၁၀ နာရီ၊ ၁၃၊ နိုဝင်ဘာ၊ ၂၀၁၁
နေရာ – မတ္တရာမြို့နယ်၊ စကျင်ရွာ၊ အထကခွဲကျောင်းဝင်း